Dr.Farole oo la kulmey odayaasha
23 Nov 23, 2012 - 11:29:32 AM
Magaalada Qardho ayaa galabta 23 November,2012 waxa kulan ku dhaxmarey madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiraxman Shiikh Maxamed Farole ,waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka Puntland.
Wasiiro ay ka mid yihiin Amniga Col.Khaliif Ciise Mudan ,Deegaanka Cabdiqani Yuusuf Cadde ,wasiiru dowladaha dekedaha Cabdiqani Salaad ,wasiiru dowladaha Sharciyada Gen.Yuusuf Axmed Kheyr ,xildhibaano iyo masuuliyiin kale oo ka soo jeeda gobolka ayaa kulankan dhinacooda qayb ka ahaa.
Iswareysi ,kala xog qaadasho iyo xaaladaha dalku meesha uu marayo ayaa uu ku saabsanaa kulankii galabta oo soo abaabuleen maamulka gobolka iyo kan degmada Qardho.
Maxamed Siciid Hogamo Roor ayaa bilowgii ku dheeraadey xaalada degmada ,baahiyaha ay tabanayaan iyo weliba warbixin guud oo ku saabsan Qardho.
Wasiirka Amniga Puntland ayaa xusey in madaxweynuhu shirar iyo kulamo kala duwan la gelidoono waxgaradka ku dhaqan Qardho iyo qaybaha bulshada.
Madaxweyne Dr.Cabdiraxman Farole ayaa dhankiisa sheegey in maalmo sii joogi doonaan Qardho si dhab ahna uga wada hadli doonaan xaaladaha jira ee degmada iyo guud ahaan Puntland.
Waxa uu sheegey in Qardho la mid tahay magaalooyinka kale ee Puntland islamarkaasina nasiibkeeda ku leedahay waxqabadka dowladda isagoona si gaar ah u xusey Xabsiga Magaalada in maamulkiisu gacan weyn ka qaatey hirgelintiisa.
Dr.Cabdiraxman Farole ayaa soo hadal qaadey arrinta waayadan danbe hadalkeedu badanyahay ee Sanadka Xukuumadda jirta uga dhiman shaqada ,waxana uu tilmaamay inaysan cidna qasbeyn xoogna wax ku raadineyn balse ay tahay arin dastuuri ah oo dhamaan goob joog loo ahaa marki la ansixinayey dastuurka.
Wafdiga madaxweynaha Puntland ee magaalada Qardho ayaa lagu wadaa ina kulamada ka sokow madaxweynuhu tago xarumo muhiim ah oo ku yaal magaalada.